N95 Mask Machine Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Mask Machine > N95 Mask Machine
N95 mask mashini refers to a series of flat and three-dimensional mask machines that use N95 non-woven fabrics as raw materials and can produce N95 masks.
Kukwanisa kuita 130-160pcs / min
Plane masiki muchina
N95 ndege masiki Mashini inosanganisira: N95 masiki muviri wemuchina, N95 yemukati nzeve maski muchina, N95 kunze nzeve maski muchina, N95 strap masiki muchina.
N95 matatu-emhando masiki muchina inosanganisira: N95 mukombe masiki muchina, N95 duckbill mask mashini, N95 kupeta mask mashini.
N95 masiki muviri wemuchina
N95 masiki muviri wemuchina, also known as mask filming machine, is a machine for the automatic production of multi-layer flat mask finished products. It can use 1 ~ 4 layers of N95PP spunbond non-woven activated carbon and filter material. The entire machine is imported from raw materials. When the nose is inserted, the edge is sealed, and the finished product is automatically processed in one line. The flat mask production equipment has stable performance, high output, low defect rate and easy operation. The mask body machine plus several inner ear mask machines, outer ear mask machines, strap mask machines or ear spot welding machines can produce various types of masks such as inner ear masks, outer ear masks, band masks and so on.
Saizi yemuchina: 3900 (L) * 905 (W) * 1600 (H) mm
Simba rekushandisa: 4KW
N95 yemukati masheki masiki muchina
Nheyo yekushanda yemukati yemasiki maski maski:
Iyo ultrasonic yemukati mhete band band yemuchina inoshandisa ultrapeld welding. Kana iyo maski yakaendeswa kune iyo inogadzirisa nzvimbo, ma ultrasonic mafungu anogadzirwa pakarepo, achigadzira micro-amplitude yakakwirira-frequency vibrate padanda rezeve, uye nekukurumidza kutendeuka kuita kupisa, kunyungudusa zvinyorwa kuti zviongororwe, uye pakupedzisira kugadzira iyo Nzeve inonamira zvachose kana kuisirwa mukati memukati memasumbu, ndiyo yekupedzisira nhanho yekugadzirisa yekugadzirwa kwemasiki emhete dzemukati. Mumwe chete mushandisi anofanira kuisa mask yemuviri chidimbu nechimedu mune mask ndiro. Izvo zvinotevera zviitwa zvinopedzwa zvoga nemidziyo kana chigadzirwa chapedzwa chapedzwa. .
N95 yemukati masheki masiki muchina parameters:
Mhando yemuchina: NK-GW2019
Saizi yemuchina: 1915 (L) * 855 (W) * 1780 (H) mm
Voltage: 220V, 1or 3 chikamu
Kugona: 40-50pcs / min
Simba rekushandisa: 6KW
Dzvinyiriro yemhepo: 6kg / cm2
N95 yemukati masheki masiki muchina features:
1. Muchina uyu wakasimba uye hautore nzvimbo.
2. Muchina wacho wose wakagadzirwa nealuminium alloy, iyo yakanaka uye yakasimba isina kumbundira.
3. Yakasimba kudzikama uye yakaderera kukundikana mwero.
4. Kuona Photoelectric kuderedza chiyero chekukanganisa.
5. Muchina uyu unogashira ultrasonic Taiwan system uye chiJapan transducer, ine yakasimba kuita uye nyore kushanda.
N95 yemukati masheki masiki muchina workflow:
Kuyerera kwebasa: (mask body) Manual kudyisa † 'kuverenga â †' yapedza chigadzirwa stacking
N95 chekunze cheki mask maski
N95 chekunze cheki mask maski working principle
Iyo N95 yekumusoro nzeve masiki mashini inosimbisa maaya elastic mabhandi pamativi ese emukati memasiki munzira yehupfumi yekupedza iyo yakapedza nzeve bhendi mask. Mumwe chete mushandisi anofanira kuisa maski muviri pane inoendesa bhandi, uye zvimwe zvese zvinotevera zviito ndezve chigadzirwa chakapera Iko kupedzisa kunoshanda pakarepo nemushini, uye kuburitswa kwemushini kwakakwira kupfuura uko kwechekare rekunze muchina.
N95 chekunze cheki mask maski parameters:
1. Chigadzirwa mhando: NK-UMM03
2. Saizi yemuchina: 2646 (L) * 620 (W) * 1750 (H) m / m
3. Voltage: imwe-chikamu 220V
4. Zvinobuda: 45-55pcs / min
5. Kudzvinyirira kwemhepo: 6kg / cm2
6. Simba rekushandisa: 2.3KW
7.I mask yemuviri wemaski inofanira kunge yakatarwa
N95 chekunze cheki mask maski features:
1. Muchina uyu wakadzika, mudiki saizi uye hautore nzvimbo;
2.PLC chirongwa chekudzora, yakasimba kudzika uye yakaderera kutadza chiyero;
3. Muchina wose unotora aluminium alloy mamiriro, ayo akanaka uye akasimba pasina ngura;
5. Inosimbisa simba rezeve bhendi inoshandurwa.
Kushanda musimboti weyakashanda yeanogadzira maski banding
Iyo ultrasonic welding nzira inoshandiswa kuisa sengeji yekuzivisa mudziyo pamushini. Iyo yekupedzisira-yakagadzirwa chigadzirwa chemassage inoisa kune yekuburitsa mudziyo. Mushure mekukwekwewa nesirinda uye nekudzvanywa nevhiri yeruva yemuchadenga, bhendi inotemwa kuti ibudise chigadzirwa chakapera. Yakaiswa pabendekete remuchina, iro basa rese rakazotevera riri otomatiki.
Unyanzvi paramita yeiyo ultrasonic mask banding muchina:
N95 strap masiki muchina
Chigadzirwa mhando: NK-BDJ10
Frequency: 20K maviri e-ultrasound masystem
Chaizvoizvo: 25-30 zvidimbu / miniti
Saizi yemuchina: 1900 (L) X 730 (W) X 1300 (H) mm
Kurema kwemuchina: 300KG
Ultrasonic mask yekugadzirisa banding michina:
1. Iyo furemu yakagadzirwa nealuminium alloy uye isina stainless simbi, ine yakajeka uye yakanaka uye haina ngura.
2. Kuverengera kuverengera kunogona kunyatso kutonga zvigadzirwa nekubudirira mukugadzirwa.
3. Variable frequency control, iyo inogona kugadzirisa michina inoshanda kumhanya zvichienderana nezvinodiwa chaizvo.
4. Dhonza mbiya kuti udye, yakanyatsomira yakamira, inogona kudzikamisa hupamhi hwezvigadzirwa zvakasvibiswa uye kuchengetedza mitengo.
5. Yunifomu kureba uye saizi kudzora kwechigadzirwa chakapera, paine kutsauka kwe ± 1mm, inogona kunyatso kudzora kureba kwechigadzirwa chakapera.
6. Midziyo yacho ine yakakwirira dhijimendi uye yakaderera zvinodiwa nevashandi vanoshanda, uye inongoda kurasa uye kuronga chigadzirwa chakapera.
7. Muchina uyu unogashira ultrasonic Taiwan system, chiJapan transducer, kuita kwakasimba uye kushanda kwakapusa.
8. Iyo otomatiki ultrasonic welding vhiri yakagadzirwa neinotungamira-yepamusoro simbi DC53, iyo inogona kureba hupenyu hwekuumbwa uye kuve yakasimba.
N95 mukombe wemasaini makina
N95 mukombe wemasaini makina includes: cup mask forming machine, cup mask mask machine, turntable cup mask welding slicer, cup mask breathing valve punching machine, cup mask nose line fitting machine, cup mask ears With spot welder, cup mask monochrome printer, cup mask breathing valve welding machine, etc.
1.Cup chimiro mask kugadzira muchina
Iyo mukombe-yakavezwa mask inogadzira muchina inogona kupedzisa yakawanda maitiro akawanda kubva pakudya, kune imwe-nguva yekugadzira, kucheka nekudzoka. Kuenzaniswa neyechinyakare bhuku rekudyisa, kudzoka uye kucheka, inogona kuchengetedza 3-5 murume-maawa, uye inogona Kugadzirwa kwemasiki makumi matatu nemasere, uchishandisa PLC control system, kubata screen skrini, nyore uye nekukurumidza kushanda, kunogona kushandiswa neumwe munhu, chete inoda kuisa pamurume kuisa uye kutora. Kubudirira zvakanyanya kugadzirwa kwekugadzira.
2.Cup mhando yemasiki yemashini
Iyo kapu-yakavezwa mask massage inonzi zvakare slicer. Iyo inonyanya kushandisa nheyo dzekucheka kweye ultrasonic uye otomatiki kukwenya uye kusimbisa mucherechedzo kupedzisa yakasarudzika-yakatemwa kucheka uye kutonhora kwemadimbu. Muchina uyu unogadzirisa zvakashata zvemakonzo echinyakare machira akadai seyakaganhurwa nzvimbo, isina kukwana saizi control, mashoma kugadzirwa kwekushanda uye mari yakakwira yevashandi. Inobatanidza maitiro mazhinji, akadai sokusaverengera, kudhirowa kudhonza, kutemha tsvina, kupatsanura tsvina, uye kunopedzisa chigadzirwa, kunogadzirisa mutengo wekugadzira, uye kunoita kuti zvigadzirwa zviwedzerwe, zvinyatsogadzika pamhando, uye zvinyatso kunaka pakutaridzika.
3.Rotary mukombe-mhando masiki welding slicer
Turntable mukombe masiki kumucheka wekucheka muchina inonyanya muchina unoshandisa zviga zvekupururudza welding uye otomatiki kumisikidza chisimbiso kuti upedze iyo yekuchetedza uye kurovera matanho emucheto wekapu masiki. Uyu muchina unogadzira unosanganisa maviri akambomira akazvimiririra maitiro emukombe-wakaumbwa masasi fusing uye kupinza. Iyo yakawanda-chiteshi chinogurika, chine mudziyo wekucheka panguva imwechete sekutambisa, zvese zviri kutetepa uye kutema misoro zvinoshanda panguva imwe chete. PLC control system inoshandiswa. , Kubata skrini yekuisa, iri nyore uye nyore kushanda kwayo, inogona kushandiswa nemunhu mumwe uye mushini mumwe chete, vashandi chete ndivo vanofanirwa kuisa uye kutora zvigadzirwa, izvo zvinogona kuponesa zvakanyanya vashandi uye kuita kuti kugadzirwa kwemakapu masiki kuve nyore uye nekukurumidza.
4.Cup mask yekufema vheji punching muchina
Mukombe-mhando mask kufema vheji vhepini yekumisikidza inoshandiswa kuruma yekumberi-kumagumo kufema vheti yemukombe-wakaita mask. Iyo inogamuchira tsoka yekuchinjika, nyore kubata, kupwanya size uye mask mask inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Hole zvishandiso.
5.Cup mhando mask yemhino mutsara wakakodzera muchina
Mukombe masasi nasal mutsara wokunyorera unonyanya kukodzera kusungira iyo mhino bhiri mutsara wekapu masiki, pachinzvimbo chetsika manyowani lamination. Muchina uyu unoshandisa pneumatic nheyo yekufambisa uye yekubatsira kupisa kifaa. Kumiswa kwakakodzera panguva yekushanda, kushanda kwakapusa, kusimba kwakasimba kwekusunga uye kushanda kwakanyanya; iyo ndiyo yakakodzera michina yeN95 / mukombe / stereo / guruva mask yekugadzira indasitiri.
6.Cup mhando yemasiki nzeve yevhareji muchina
Cup mhando mask masheki ebhendi nzvimbo welding muchina inonyanya kukodzera kutetepa kweflat, yemukati nzeve bhendi / ekunze nzeve bhendi, kapu mask, duckbill mhando uye mamwe masiki akaumbwa. Muchina uyu unoshandisa yekutanga transducer, yakagadzika kuburitswa, yakakwirira-yepamusoro chikamu chechikamu, yakavimbika chiitiko, yakangwara dhizaini yemuchina wacho wose masks, kumeso kwemasks, nezvimwewo.) Yakagadzirirwa pamwe nekushomeka kwemahara, ine yakakwira kugadzira zvigadzirwa, kushanda kuri nyore uye yakagadzika mhando;
7. Cup masiki monochrome kudhinda
Mukombe maski monochrome pad printer inoshandiswa kupurinda mukombe mask logo.
8.Cup mhando yemasipi kufema vheji yewelding
Cup mask yekufema vheji yekuvhiringidza welding muchina inoshandiswa kuturikidzira mukombe mask kufema vharafu.
N95 duckbill mask mashini
Yakazara otomatiki yeyakagadzirwa ultrasonic duckbill mask kugadzira muchina (duckbill mask kugadzira muchina) muchina uyo unoshandisa iwo musimboti weiyo ultrasonic isingadhuri welding kugadzira duckbill masks yakakodzera maindasitiri akanyanya okushatisa. Mushini wemuchina uyu unogona kushandisa 4 ~ 10 maturusi ePP asina machira akagadzirwa uye nemidziyo yemafirita (senge meltblown jira, activated kabhoni, nezvimwewo), kuitira kuti igone kuburitsa masiki apera ane akasiyana siyana mafichaji akadai saN95 neFFP2. Uye muchina uyu une yakakwirira kwazvo degree remota. Icho chiitiko chega-mutsetse chinoshanda kubva pakupa kusvika kumagumo apedza: kudya kwega kwezvinhu zvakasvibirira, yakazvimirira yemumhino mutsara wekufambisa system, uye mutsara wemhino unogona kuturika nekuzviputira nemachira asina-kurukwa, uye wozopetwa Wakazvigadzirira Uye chigadzirwa chakapera. uye gomba revhisi rekufema rinogona kuwedzerwa zvoga. Chigadzirwa chakapera chinogadzirwa neiyi duckbill mask muchina ine chimiro chakanaka; muchina wacho une basa rakasimba, rakakura kuburitsa, rakaderera hurema hwekurema uye kushanda kuri nyore.
Duckbill mask Machine parameter:
Mhando yemuchina: NK-YZ0006
Saizi yemuchina: 4190 (L) * 820 (W) * 2500 (H) mm
Kugona: 45 ~ 60 pcs / min
Simba rekushandisa: 5.3KW
Kugona: 45pcs / min
Duckbill mask mashini maficha:
1. Zvakazara otomesa chirongwa
1.Aluminium alloy frame, yakasimba uye yakanaka, simbisa kuti hukuru hwechigadzirwa chakaperera hwakajeka;
2.Stainless simbi kufuridzira, inoshandurwa kuruboshwe uye kurudyi;
3.Tension vhiri kurongedza kugadzirisa iko kunetsana kwemucheka, kuitira kuti ive nechokwadi chekuita runako uye kumeso kwechigadzirwa chakapera;
4. Yakasununguka nasal mutsara wekutumira boka, yakakodzera kugadzirisa uye kugadzirisa; mushure mekunge mutsara wemumhino wakaiswa, nzvimbo yekumisikidzwa yakamiswa kuti inyatsoita chokwadi chesaini yemutsara uye kusimba kwemutsara wemhino.
Folding mask muchina wekuisa:
Folding mask muchina, inozivikanwawo seLijin C maski muchina, iri yakazara otomatiki muchina wekugadzira wekupeta masiki miviri. Iyo inoshandisa ultrasonic tekinoroji kusunga matatu kune mashanu matanda ePP isiri-yakarukwa mucheka, yakagadziriswa kabhoni uye firita zvinhu, uye kuibvisa. Folding mask muviri, inogona kuseta 3M 9001, 9002 masiki muviri. Zvichienderana nezvinhu zvakagadzirwa, masiki anogadzirwa anokwanisa kusvika akasiyana akadai seFFP1, FFP2, N95, etc. Chikepe chemhete chakagadzirwa nemucheka usingarukwa, izvo zvinoita kuti nzeve dzeiye anopfeka dzigadzike. Mhedzisiro mhedzisiro yemasuru yejira remachira yakagadzika yakanaka uye yakakwana Iyo inokodzera kumeso kwevanhu veAsia uye inogona kuiswa kune yakakwira maindasitiri eindasitiri akadai sekuvaka uye mugodhi.
Folding mask muchina paramita:
Saizi yemuchina: 4400 (L) x 860 (W) x 1300 (H) mm
Kugona: 80pcs / min
Mabasa uye chimiro chekupeta mask Machine:
1. Inogona kuseta 3M 9001, 9002 uye mimwe miviri yekupeta maski.
2, PLC otomatiki kudzora, otomatiki kuverenga.
3. Chidimbu chekugadzirisa chinja, chiri nyore kuchinja machira.
4. Iyo yekuumbwa inotora iyo yekubvisa uye yekutsiva nzira, iyo inogona kukurumidza kuchinja iyo furu uye iwane mhando dzakasiyana dzemasiki.
5. Muchina wacho wese wakagadzirwa nealuminium alloy, iyo yakanaka uye yakasimba uye haina ngura.
7, kudyisa kwepamberi uye kugamuchira chishandiso.
8. Yakakwirira kudzikama uye yakaderera kukundikana mwero.
Hot Tags: N95 Mask Machine, Vagadziri, Vagadziri, Wholesale, Fekitori, Tenga, China, Yakagadzirwa muChina, Mutengo, Mutengo weChinyorwa, Quotation, CE, FDA
n95 kuvhiyiwa mask maskN95 kumeso mask kugadzira muchinan95 masiki michina